Rami Malek oo ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee sanadka 2019 Actor-ka ugu fiican… – Hagaag.com
Rami Malek oo ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee sanadka 2019 Actor-ka ugu fiican…
Posted on 25 Febraayo 2019 by Admin in fanka // 0 Comments
Rami Malek ayaa ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee atooraha ugu fiican kadib markii uu matalay shakhsiyada heesaaga iyo mu’alifka heesaha Freddie Mercury ee filimka “Bohemian Rhapsody” xaflad lagu qabtay akademiyada culuunta iyo fanka sheneemooyinka Mareykanka nuskhada 91aad magaalada Los Angeles.
Malek ayaa u sheegay xubnaha kooxda Queen ama boqorada “Waxaan sii wadi doonaa inaan weligay ahaado qof idinka mid ah,”.
Malek ayaa horey u qaatay abaalmarinta “Golden Globe” ee jilaaga ugu wanaagsan ee doorka shakhsiyada isla Freddie Mercury, heesaaga kooxdii Rock ee Britain (Queen).
Rami Saed Malek ayaa ka soo jeeda qoys ree masar ah oo heysta diinta kristianka coptic-ga ama qibdhi oo u haajiray dalka Mareykanka sanadkii 1978, iyaga oo ka haajiray magaalada Samalout oo ka tirsan gobolka Minya ee Masar, mar uu u waramay television ayaa sheegay inuu sidoo kale asalkiisa ka soo jeedo Giriig.
Malek ayaa u soo baxay dunida xidigaha markii uu matalay shakhsiyada Elliot Alderson ee musalsalkii taxanaha ee TV-ga “Mister Robot”. doorkaasi wuxuu ku helay abaalmarinta ‘Emmy Award’ sanadkii 2016.
Filimka ugu fiican ee ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee sanadkan waa film Mexican ah oo la yiraahdo “Rome”.
Malek ayaa mataano la ah wiil kale oo sidiisa oo kale ah, walaashiis ka weyn waa dhakhtarad, Malek ayaa awooday inuu ku hadlo luqada carabiga asaga oo jira afar sano inkastoo uu ku dhashay magaalada Los Angeles, California sanadkii 1981.